Olona lwaphulo-mthetho luMdaka luKhuthazwe yimidlalo yeVidiyo | Iindaba zeGajethi
Olona lwaphulo-mthetho lubi kakhulu lukhuthazwe yimidlalo yevidiyo
Ukuziphatha komntu kunzima kakhulu ukuba kufundwe kwaye kumiswe imigangatho ngaphakathi kweepateni ezichazwe yisayensi okanye amayeza onyango. Kuyinyani ukuba iindlela kunye nokuziphatha kunokwahlulwa kwaye kuhlalutywe ngokwahlukeneyo, kukhathalogu ukuphazamiseka kwengqondo okuhlukeneyo kunye nezifo zengqondo ezinokunyangwa ngonyango okanye ngamayeza.
Kodwa ayingawo amaxesha ambalwa apho sifumana khona izifundo ezalatha kwiindlela ezichaseneyo ezinokuthi ziphikisane. Kwaye akukho ziqendu zinqabileyo zobundlobongela ezenzeka ngaphandle kwesizathu okanye izizathu eziphendula kwingcinga efanele ukulawula iingqondo zabantwana babamelwane bonke, kwaye kanye namhlanje, sikuzisa ingqokelela yeziganeko ezoyikisayo ezazifanele ukubangela imidlalo yevidiyo, kwaye Ngapha koko, siyakumema ukuba ubonakalise oku kulandelayo: ngaba impatho yeendaba oyifumene ilungile?
UJosé Rabadán, umbulali wekatana
Eli tyala lalithandwa kakhulu eSpain ngenxa yoyikeka ukubulala kathathu Oko kwakubophelekile, kuba ziindaba kwimithombo yeendaba zangaphandle. Ngelo xesha, emva phaya kwi-2000, uRabadán wayeneminyaka eli-16 ubudala. Nangona kunjalo, ngo-Matshi 31 waloo nyaka, into engacingekiyo yenzekile: wayesebenzisa a ikrele lesamamura ayinikwe ngabazali bakhe kwaye wabulala abazali bakhe kunye nodadewabo ngegazi elibandayo Uneminyaka eli-11 kuphela ubudala kwaye une-Down syndrome-. Ngokwedatha yesidumbu, umama wakhe wayengenalo ithuba lokuzithethelela, ngelixa utata wakhe wayeyazi into eyenzekayo.
Ngokwamapolisa, uRamadán uvumile ukuba ukubulawa kwabantu ngenkani kukhuthazwe Umnqweno wokugqibela weVIII, umdlalo apho umbulali wayexakeke kakhulu ukuya kwinqanaba lokunxiba iinwele ezifanayo ne-protagonist yomboniso, Squall, nangona kufanele kugxininiswe ukuba inkxalabo yenkwenkwe yayiqhelekile: kukhangelwa kwigumbi lakhe lokulala ezinye iimela zafunyanwa ukongeza iincwadi zenkundla zobusathana. Isigwebo sakhe sasixhomekeke kwimeko yokubandezeleka I-psychopathic epileptic psychosisNgapha koko, ukuba mncinci kunye nohlaziyo lomthetho wabantwana, URabadán usebenze iminyaka esixhenxe kuphela, iinyanga ezilithoba kunye nosuku olunye lokuvalelwa ukuze abulale kathathu egazini elibandayo nokubala ngokuvuza. Okwangoku ukhulu kwaye indawo yakhe igcinwe.
Unyana ubulala utata wakhe ngoncedo lomhlobo okhuthazwe kukufa okunyukayo 2
Eli tyala lisibeka eSpain, ngakumbi eAlaro, eMallorca. UAndreu Coll Tur, oneminyaka eli-19 ubudala, wayonwabela ubomi obutofotofo ngenxa yobutyebi bukayise kwishishini, usomashishini odumileyo walapha. Kodwa kubonakala ngathi ubomi babungekho bobubububi njengoko kubonakala ngathi: UAndreu wathi utata wakhe wayehlala emhlukumeza. Umfana wayeyithanda kakhulu imidlalo yevidiyo, ngakumbi Call of Duty y Ukuvuka okungasekhoyo 2, kwaye ngesiqhelo bekuba neeseshini zemidlalo yemihla ngemihla ukuya kuthi ga kwiiyure ezisi-7 okanye nakwi-12 ngempelaveki. Enkosi kumdlalo we-Intanethi, wadibana UFrancisco Abas, 21, awayedibana naye kwangoko. Aba babini babesabelana ngokusondelelana, bade baphulula amalungu esini kwi-webcam kunye kwaye beza kulala ebhedini enye kwa-Andreu- nangona esithi, ngokungafaniyo nomntu awayehamba naye, uyathandana, ngelixa uFranciso esithi uyathandana nomhlobo wakhe kwaye uziva esetyenziswa emva kolwaphulo-mthetho.
Ngokudibeneyo, baceba ukubulawa kosomashishini, kwaye baphinde benza izixhobo ababecinga ukuba zilungele ulwaphulo-mthetho: ibhola ye-baseball iyafana naleyo isetyenziselwe uninzi lwethu kuyo Abafileyo 2 eliphumayo. Kodwa le nto yayikude nokuba ibe yinto efanelekileyo yokubulala Ubuzalwana bababulalinjengoko kuye kwafuneka bazame kabini. Kowokuqala, bafaka iziyobisi kutata ngesixa esikhulu sesisa Lala kwaye bakwazi ukumshiya ehleli phantsi. UAndreu akazange alinge ukubetha kuqala kuyise, wenza njalo noFrancisco, ngaphambi kokuba umhlobo wakhe amxelele ukuba uyamthanda. Usomashishini uvukile kwaye abakwazanga ukugqiba ukubulala. Ulutsha luye lwakwazi ukweyisela le ndoda ukuba inxeba lasentloko lenziwe ngumqhekezi ongene endlwini. Ekugqibeleni, kwaba njalo Ngentseni kaJuni 30, 2013 xa babekwazi ukwenza olu lwaphulo-mthetho, Ukuphelisa ubomi bukatata ka-Andreu ngeklabhu, ngaphandle kokumelana nokubeka kwakhe, njengoko kutyhilwe ziingxelo zoogqirha bezomthetho. Emva kokumbulala, bachitha i-euro ezingama-500 ekuthengeni nasekuthengeni umdlalo wevidiyo. Okwangoku bakhonza entolongweni kwaye oogqirha bengqondo bazimisele ukuba abanasifo nakuphi na ukuphazamiseka: bayayazi indlela yokwahlula ngokugqibeleleyo phakathi kwenyani kunye neyona nyani.
NguHalo 3 kuphela obangela ... ukutyeba kakhulu
UDaniel PetricXa wayeneminyaka eyi-16, wahlaselwa sisifo esamgcina egula ekhaya. Ngaphambili, wayenengxabano enzima nabazali bakhe malunga nokuvalwa kokuthenga umdlalo Halo 3, umdlalo awayewazi ngomhlobo nommelwane. Abazali babafana abangamakhwenkwe, bexhalabile kukuthanda kwamakhwenkwe umdlalo kunye nomxholo wawo onobundlobongela, bagqiba kwelokuba bababandeze ubuncwane babo obuxabisekileyo kwaye bangabavumeli ukuba baphinde bawudlale. Nangona kunjalo, uDaniel, nangona esempilweni, wakwazi ukuzimela kude nekhaya ayokuthenga umdlalo kwaye azinikele ngasese Iiseshoni zemarathon ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-18 ngaphandle kwekhefu. Ngokukhawuleza abazali babubona ububi benkwenkwe baza bawuthimba umdlalo, ababewagcina kwindawo ekhuselekileyo apho babephethe nompu I-Taurus PT-92 de 9 mm.
Kwiveki kamva, ngo-Okthobha 20, 2007, uDaniel wakwazi ukuvula isisefo akufumana ikhowudi yokufikelela. Wathabatha umpu kwaye ebandayo eyoyikekayo wathetha nabazali bakhe, awathetha kubo babenento ebamangalisayo kubo kwaye kwafuneka bavale amehlo abo. Umama kaDaniel wadutyulwa entloko, esifubeni nakwiingalo, ngelixa utata wakhe wasindisa ubomi bakhe ngokungummangaliso nangona wayedutyulwe kwikakayi. Emva koku, uDaniel wasibeka esi sixhobo kuyise, awayecinga ukuba ufile, ngenjongo ezimsulwa yokukhohlisa amapolisa enzululwazi kwaye abonakale ngathi uyazibulala. Kwimizuzu kamva, udadewabo kaDaniel nomyeni wakhe bafika ekhaya, apho umbulali wabaxelela ukuba abazali babo babelwe ngamandla. Lo dade wangena ngaphakathi wakhawuleza waqonda ukuba kwenzeke ntoni; Ubize amapolisa kwaye uDaniel wazama ukubaleka kwiloli kayise, kwaye yaqwalaselwa, ngomdlalo weHalo 3 kwisihlalo sabakhweliKodwa amagosa onyanzeliso lomthetho amnqanda ngelixa ekhwaza ukuba utata wakhe ubulele umama wakhe. Igqwetha lakhe latyhola ukuba imeko yakhe yempilo kunye neeyure ezininzi azichithe ekungcakazeni zaphazamisa ukulingwa kwakhe zaza zamnyanzela ukuba enze ulwaphulo-mthetho. Okwangoku udontsa isigwebo sobomi ngesigwebo esiqwalaselwe u-2031.
Ubomi ngumdlalo wevidiyo. Wonke umntu kufuneka afe ngaxa lithile »
Devin Moore Wagwetywa ngo 2005 ngo ukubulawa kwamapolisa ama-3 emva kokubanjelwa ubusela bemoto. Ngesakhono esithile, UDevin wakwazi ukufumana umpu .45 Elinye lamagosa awayemkhapha kwaye ebulala amapolisa amathathu ngaphambi kokuba abaleke kwisikhululo samapolisa ngokwawo eqhuba a Imoto yokujikeleza awayeyibile apho. UMorell wayengumfundi ophumelele kwisikolo samabanga aphakamileyo kutshanje, engazange abe ngumntu onengxaki, kwaye wayede wangena kwi-United States Air Force. Ngokucacileyo, le ndlela yokuziphatha iya kulungiswa ngokudlala Grand Theft Auto: Vice City kwaye yabangela impikiswano enkulu eMelika.
UMoore, ngexesha lokubanjwa kwakhe emva kokuba ebaleke kancinci, uthe "Ubomi ngumdlalo wevidiyo. Wonke umntu kufuneka afe ngaxa lithile ». Kwelinye lokuncinwa, watyhola ngelithi wayenoloyiko lokuya ejele kangangokuba wadubula amagosa ngaphandle kwesizathu. Kwityala lakhe walivuma ityala kwaye igqwetha lezomthetho lathi UDevin wayenengxaki yokugula emva koxinzelelo, Ukuphathwa gadalala nokuphathwa gadalala kwabantwana kwakusetyenziselwa ukuzama ukumhlangula kwisigwebo sentambo: ngaphandle kwale migudu kunye nezibheno ezinikezelwe kwiNkundla yase-Alabama Criminal Court, wabulawa Inaliti ebulalayo ngo-Okthobha 9, 2005.
Ubulala intombi yakhe kuba "wawulawula umoya wakhe"
UDarrius Johnson, umdlali oqhelekileyo we Xbox 360, awayezinikele kuye iiyure ezininzi, wabulala intombi yakhe kabuhlungu, UMonica gooden, ibhinqa eliselula elineminyaka engama-20 kuphela ubudala. Esinye sezixhobo ezine zolwaphulo-mthetho yayiyikhonsoli Xbox 360 kaDarrius, ngawo wabetha uMonica ephindelela entloko de waquleka. Ke, kusetyenziswa iimela ezintathu ezahlukeneyo kwaye yahlaba intombi yakhe ibangela ukwenzakala okuninzi emqolo, esilevini, entanyeni nasesuswini.
Ngokutsho kombulali, wabuphelisa ubomi belo bhinqa liselula kuba waqinisekisa loo mfazi wawulawula umoya wakhe kwaye naye wayeyazi lonto Ndidinga ukuncama umntu othile wophawu lweenkwenkwezi lweTaurus -Wacwangcisa nokufa kukatatomkhulu wakhe, wophawu olufanayo kunye nokugula kakhulu kwaye, ngokumangalisayo, wamgweba ngokuchanekileyo ngenxa yemeko yakhe ebuthathaka. Iingxelo zale ndoda zabothusa abaphandi, naye wavuma xa wayebulala intombi yakhe wayelwa nenamba.
Olu lwaphulo-mthetho lwaluyinto embi kakhulu ngemihla yalo. Yenzeke kwi Brasil kwaye isizathu sempikiswano sasinomdlalo Tibia embindini wethagethi. I-protagonists yale ntlekele ye-macabre yayi UGabriel Kuhn, Uneminyaka eli-12 ubudala, kwaye UDaniel petry ye-16, izihlobo, abamelwane kunye nabaqhelekileyo Tibia. Usuku lunye, UGabriel wacela uDaniel ukuba abolekise ngeekhredithi ezingama-20.000 XNUMX zomdlalo. UDaniel wamamkela kwaye wamthemba umhlobo wakhe, ngesithembiso sokuba uza kubabuyisela kuye kwixesha elizayo. Nangona kunjalo, UGabriel akazange asigcine isithembiso sakhe Kwaye wade waya kude nokuvimba uDaniel kuluhlu lwabahlobo bakhe.
Ngomsindo, uDaniel waya endlwini yomhlobo wakhe wakudala wathi xa evula umnyango, balwa de uGabriel wabonakala ngathi ubulawa kukufa Ukuncipha. Emva kwexesha, uDaniel uthatha isigqibo sokuwufihla umzimba kwigumbi eliphezulu, kodwa umzimba kaGabriel unzima kakhulu kuye, ke oko kuya entlokweni yakhe. ulibethe libe ziingceba ngesiqwenga sesandla. Xa wayeqala ukuyikhulula imilenze, UGabriel weza ezingqondweni, kodwa oko akuzange kumnqande umbulali ukuba aqhubeke nokusika imilenze yakhe engezantsi de wabulawa kukopha kakhulu kunye nokothuka. Kwakhona, uDaniel wazama ukuphakamisa umzimba ngentambo, kodwa kwakusenzima kuye, ke wancama wagoduka nalo lonke uxolo lwengqondo emhlabeni. Ngumama wenkwenkwe owafumana unyana wakhe eshunqulwe ekhaya kwaye amapolisa akazange athathe thuba lide ambambe uDaniel, owavuma ukuba ulwaphulo mthetho. Emva koko, ukuvavanywa kwesidumbu kwatyhila oko yayingeniswe nge-anally ngumbulali, owakhanyelayo ukuba ulifanasini. Kuyabonakala ukuba, kwaye iyamangalisa njengoko inokubonakala inkohlakalo yolwaphulo-mthetho, isigwebo esafunyanwa nguDaniel sasisodwa Iminyaka engama-3
Njengoko sibona, onke la matyala ahlala ekhutshiwe ngaphandle komxholo kwaye anconywa kukutyhaphaka koonondaba, befuna kwimidlalo yevidiyo a umtyholwa ongekhoyo. Iziyobisi ziyingozi, ngaphandle kwamathandabuzo, nokuba kukwimidlalo yevidiyo, ukusetyenziswa gwenxa kweziyobisi okanye imikhwa engeyiyo-nokuba sempilweni, kuthathwa kakhulu, kunokuba yingozi. Ngale ngxelo, uya kuba nakho ukuqaphela ukuba ikhonkco elasekwa kumajelo eendaba phakathi kwezi ziganeko zoyikekayo kunye nehlabathi lamavidiyo ithambilekuhle oonobangela bahlala behleli kunye namashwa amabi ngokulinganayo kwaye zezona zizathu zokwenyani zala malishwa: izifo, ukuxhatshazwa, impindezelo okanye impatho-mbi bezikho kwimeko yala matyala aziwayo.
Ke, ngaphandle kwamacandelo anzima anokucinga ngecandelo, Imidlalo yevidiyo akufuneki ithathelwe ingqalelo njengobubi okanye unobangela wamashwa amaninzi. Ngokuchanekileyo, kusezandleni zabadlali, abazali kunye nootitshala ukuba bazi indlela yokunika idosi efanelekileyo kunye nexabiso lokonwaba ukuba yintoni le, uyithandayo, ethi, ngendlela, kwaye usebenzise nezifundo ezinamandla, ifikelele ukwandisa ubukrelekrele bokubona Abasebenzisi bayo - kukho intetho ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-20 zabadlali abasetyenziselwa ukudlala imidlalo yentshukumo-, phucula imemori yakho -Kwafunyanwa ukuba abantwana abathandayo Lines Babenobungakanani obukhulu bokugcina ngokunkqaya amakhulu amagama kunye neempawu zabalinganiswa- kwaye babenze bazenze kunokwenzeka ngakumbi ukunxulumana nabanye abantu Izangqa ezandayo zobuhlobo kunye nokudibanisa ubomi bosapho-.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » Olona lwaphulo-mthetho lubi kakhulu lukhuthazwe yimidlalo yevidiyo
Lithini eli nqaku lethebhu? Irhafu kumatshini oshicilelweyo we-tabloid osola imidlalo yevidiyo ngokubulala? Nceda ujonge ukususa eli nqaku njengekuphela kwento eya kuyenza kukwenza igama elibi kwihlabathi lemidlalo yevidiyo, kunye / okanye le bhlog kunye namalungu ayo.
Siyavuyisana nawe, ufikelele kwinqanaba le-Antena 3 ngokwamaxwebhu, ukungqinelana kunye nengqondo eqhelekileyo. Ukubala onke amanani amabi, ewe.
Ukuba undixolele, kuya kufuneka ndiyodlala iSuper Metroid, ndifuna ukuya ngobu busuku ndiyokuqhumisa izinto ngesiqhushumbisi somjukujelwa.
Phendula u Yaru
Ngaba le yividiyo yomdlalo wevidiyo okanye uyandigcina?
Inika imvakalelo yokuba awulibambanga inqaku. Ngokuzenzekelayo, iqala ngetoni etyheli kwaye kamva, ngokuchanekileyo, ichitha ubuxoki obubonisa ukuba imidlalo yevidiyo iyimpembelelo embi, kwaye isixhobo esinye esisetyenziswa yimithombo yeendaba sisetyenziswa, kodwa njenge-boomerang.
Eyona nto ibuhlungu kukufunda la magqabantshintshi apho ukurhoxiswa kwenqaku kufunwa okanye inkululeko yokuthetha ithintelwe, xa kanye aba bantu bekhalela iindlela zokuphendula ezenza abo benza ulwaphulo-mthetho kwimidlalo yevidiyo: abaqondi ukuba babekwe kwinqanaba labo. Kwaye sinomnye phaya phaya esithi uzakuthatha inxaxheba ekumiliseleni imijukujelwa: ulumke, i-intanethi ayaziwa ngokungathi ucinga, masibone ukuba amapolisa aza kuza endlwini yakho. Lumka kwinqanaba lokuqonda.
Ungayivumelanisa njani ikhalenda yakho ne-Android Wear
Ngabuphi ubuqhetseba endinokubamba kubo amakhonkco amaninzi kwiphepha lewebhu?